Xisbi dowladda Farmaajo uga qeyb geli doono doorashooyinka oo la diiwaan geliyay.
Weerar askar lagu waxyeelleeyay oo ka dhacay degmada Yaaqshiid.
Sii deyntii Silvia Romano iyo dilkii George Floyd, maxay soomaalidu ka baran karaan!
Melleteriga Suudaan oo Eedayn kulul ujeediyay dowladda Itoobiya.
Sunday August 18, 2019 - 12:39:38 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Weerarkaas oo ahaa mid naf hurnimo waxaa fuliyay laba dagaal yahan oo kasoo kala jeeda beelaha Dir iyo Raxanweyn oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed.
Ragga weerarka fuliyay oo katirsanaa ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa kala ahaa Maxamed Deeq Ibraahim Aadan oo kasoo jeeda beesha Dir gaar ahaan jufada gaadsan wuxuu ku dhashay deegaanka quracle ee gobolka Bakool.
Max'med Deeq ayaa isagoo kaxaynayay gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay wuxuu weeraray maleeshiyaad uu Mareykanku ku tababaray garoonka Balidoogle xilli ay dhoobnaayeen afaafka hore saldhig kuyaal degmada Awdheegle.
Manuur Ibraahim Xasan Gaaboow oo kasoo jeedo beesha Raxanweyn gaar ahaan Jilible ayaa ahaa dagaalyahankii labaad ee fuliyay weerarkii naf hurnimo ee saldhigga Awdheegle, weerarkan ayaa geystay khasaaraha ugu badan ee gaaray ciidamada Mareykanku tababaray ee Bangaraafta loo yaqaan.
Raggaan ka hor intii aysan weerarka fulin ayay reebeen farriimow dhowr ah oo ku socda shacabka Soomaaliyeed iyo isbaheysiga duullaanka shareeca ladirirka ah kusoo qaaday dalka Soomaaliya.
Halkan ka degso Wareysiga MP3 ama hoos ka dhageso
Askari katirsan ciidamada dowladda oo wiil dhalinyara ah ku dilay isgoyska Siinaay.
Ciidamada Yahuudda oo qof muslim ah ku dilay magaalada Al Qudus.
Askar iyo shaqaale dowladeed oo lagu dilay magaalada Muqdisho.
Sedax Askari oo lagu dilay Sh/hoose hubkii ay wateena laga qaatay.
Ciidamada Itoobiya oo qaraxyo iyo weeraro lagula beegsaday duleedka Qansaxdheere.
Daawo Video: Ciidamada dowladda oo dhalinyaro ku xasuuqay deegaanka Gololeey.
Faransiiska oo mamnuucay in Kaniiniga Chloroquine lagu daweeyo Covid19.